Whiten My Teeth | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Posts tagged "kuzvichenesa zvikadaro mazino angu"
Pane imwe nzira yokuti unogona kuita kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino yenyu makachengeteka? Kwete zvese kana anogona kuvimbwa. Nyaya ino inokurukura vakaedzwa nzira nokuda dzakachengeteka meno nokungwarira uye zvakanaka.
Kana ukaona kutambura kubva chingamu aikanganiswa kubva-awa maviri rinoparadza, unofanira kuedza kubvisa micheka pashure 30 maminitsi pachinzvimbo. Kunyange zvakakodzera kushandisa micheka kaviri pazuva 30 maminitsi kwenhambo mavhiki maviri, havana vangangoora kukonzera pamatadza wanda.
ZANO! chiremba wemazino Your kuita meno rakanga rachena vane Laser. Izvi zvinogona kuva inoita nzira une meno vako dzokera shure kwavo kutanga chena ruvara.
Izvi zvinoda kuti kushanyira chiremba wemazino yako results are yechipiri kuna ani. Vanachiremba vemazino vanogona kupa nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako kuti zvaizova nengozi laypeople kushandisa pachitoro.
Kuti tirambe mazino machena, unofanira kuva nguva nyanzvi cleanings kuitwa. Kuronga kushanyira wamazino mwedzi mitanhatu ose, Zvakanakisa kuita kwako kugadzwa inotevera uchiri ikoko mumwe yokuchenesa. Unofanira kuedza kuchengeta pakugadzwa uku sezvo insurances vakawanda kufukidza nzira iyi.
ZANO! Ngwarira kana kudya kana kunwa mushure iwe kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Whitened meno zvikuru kubatwa echitema.
Laser rakanga rachena mazino ndeimwe zvakanakisisa nzira panyaya rakanga rachena wako chiremba wemazino asaita. Zvichida ichi ndicho mumvuri ivo pakutanga vakanga vari mumwe nokukurumidza kushanya. A bleaching mumiririri rinoshandisirwa mazino, uye ipapo vari akapfura aine Laser kuita Activate. Mazino ari pakarepo nokuda shanu kana matanhatu noruvara.
Unogona kuva aikanganiswa mamwe mazino rakanga rachena zvinogadzirwa. Kunyange zvingave kwekanguva ezvinhu, rinogona achiri kukuvadza. Kana vanorwadziwa ichi, kurega kushandisa chigadzirwa uye kuona chiremba wemazino sezvo nokukurumidza sezvaungagona. chiremba wemazino Your anogona kupa zvigadzirwa akasiyana kana magadzirisirwo kubatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino venyu nyarara nenzira.
ZANO! Add kubikira mushaba kuti mazino enyu kwokugeza mazino yokungoitawo. Banking mushaba ndiyo nzira yakanakisisa zvinobudirira uye wakasununguka kuzvichenesa zvikadaro mazino ako.
The makemikari zvose zvezvinhu izvi aizonyatsovachenesa zvakawanda zvachose kuburikidza chokuedza kuti mazino enyu. The hasha zvazviri anobvisa munwe brushes ndiko anosimbisira mazino ako akachena.
Mastrawberry muri guru dzinongoitika kurapa nokuda yakasvibiswa mazino. Nzira iyi kwave rikaratidzwa kushanda. Zvitende kana kwete, vachidzipukuta achekwa Strawberry pamusoro mazino enyu, ungagona kuzvichenesa zvikadaro. Regai michero zororo kumativi shanu maminitsi pamusoro mazino ako kuwana zvakanakisisa zvinobvira migumisiro kurapa.
ZANO! Kana uri kushandisa chero zino-rakanga rachena zvinogadzirwa, kumisa pakarepo kana bundu hwapedyo. The utetsa chingava chiratidzo chokuti uri kukuvadza mazino ako.
Chokwadi unofanira kuenda wemazino asati rakanga rachena mazino ako kana uine untreated in kana vari kutambura pamatadza chirwere. Unofanira kutora mamwe hanya apo rakanga rachena mazino ako. chiremba wemazino Your achagona kukutaurirai kuwana nzira iri inonyatsobudirira uye ngozi kuti muite izvozvo.
Ungada kuva nyanzvi kuzvichenesa zvikadaro mazino ako kana muchitsvaka anokurumidza nemigumisiro kana une staining akaipa kwazvo. Nzira iyi kunodyira zvishoma, asi ungagona kuzvichenesa zvikadaro nani mazino ako uye zvinogona dzichimhanya kupfuura dzimwe rakanga rachena nzira.
ZANO! Kana uchisvuta ipapo chaunotanga kuita ndiko kusvuta. Kana uchisvuta, kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, uye zvadaro ramba abvirise, muri Flushing mari yako kure.
Micheka kuti kuzvichenesa zvikadaro meno chipa uye zvikuru inokwanisika. micheka izvi anoiswa pamusoro mazino ako. Rakanga rachena rinoparadza vakanakidzwa pfupi kuwedzera mukukurumbira, nokuda zvishoma pane akakwana nemigumisiro.
Kana uine kunwa zvinwiwa zvinogona kukonzera staining, anovatevera mvura. Izvi zvinogona kudzivirira mazino enyu kubva kutanga akasvibiswa. Munogonawo kunwa izvi kubudikidza uswa, kana kushandisa zvisiri skim mukaka coffee wako.
ZANO! Pashure rakanga rachena mazino ako, kushandisa Vaseline kukuyeuchidza kuramba achinyemwerera. Nepo irege kuva tastiest nezvechisarudzo, ari petrolatum mondo kuchaita kuumba rwokudzivirira, pfupi bemhapemha kuti chichamutadzisa staining.
Dzivisa kure pasherufu mouthwash, kunyanya kana pane ari ruvara akawedzera. Mouthwash anogona chaizvoizvo kukonzera mazino ako kuti zvava rakabuda ruvara. wo, vakawanda vane doro ive chirungiso chinogona kuita rurimi rwako uye mazino nzwisisa, uyewo kupinda dzeropa.
ZANO! Iwe uchava nechivimbo pamusoro kunyemwerera kwako kana uri kuva nechivimbo mweya yenyu. Vachinanzva musana ruoko rwenyu yakachena kuziva kana une mweya wakaipa.
Organic mafuta kokonati ndiko rakanga rachena mumiririri nokuda mazino ako. nokuti 10 maminitsi pazuva, edza rinsing namafuta womukokonati kweinenge 10 maminitsi ose zuva. After anenge 10 maminitsi, sukurudza muromo wako uye bhurasho sezvo imi raizodai. Zvichida uchaona zvibereko pashure pemazuva mashomanana.
Ziva chii mazino ako rakanga rachena nzira chinoenda kukuitira. Kana uine musoro neururami pamusoro zvigadzirwa iwe kushandisa, unogona vanodzamara mwoyo mazino ako. Funga zvinobatanidzwa, kufanana zera rako, uye rwakadini echitema uye discolorations pamusoro mazino ako. Bvunza chiremba wemazino wako chii kutarisira.
ZANO! Chewing yakachena parsley kana cilantro kunogona kukubatsira yakajeka kunyemwerera yako. Izvi nemiriwo zvakasikwa dzinosanganisira ehupfumi anogona vachiita neutralizing aizonyatsovachenesa inokonzera mabhakitiriya.
Kukwesha mazino ako pashure kudya chinhu chinokosha pakuzvichengeta inopenya uye kupenyerera. Izvi zvinonyanya kukosha kana uri kunwa kofi.
Dark zvokudya inoramba zvinogona kukonzera muromo wako kuti aizonyatsovachenesa pamusoro nguva. Dzivisa echitema izvi kuburikidza kutsenga ane shuga akasununguka chingamu pashure kudya. Izvi riri kusimuka richabvisa chero zvokudya inoramba uye nokuzvichengeta kubva staining mazino ako.
ZANO! Zvinosanganisira kugara flossing kwenyu zuva nezuva. Izvi zvinogona kukubatsira kubvisa nebheji wako anogona discolor mbeu mazino ako.
Mastrawberry ndiwo nyore nzira sezvingatarisirwa yakajeka mazino enyu oneka akachena. Mastrawberry vanogona zvakaratidza nei zvakanaka chaizvo paupenyu hwako rakanga rachena mazino chingamubatsira. Bvumira Strawberry kuramba mazino enyu kwemaminitsi mashanu nokuda Tinonyanya.
Kana uchida mazino enyu ndichene, murege kupedzana maranjisi kana zvimwe Citrus michero. Kuedzawo kusanwa facial dzavo. The acids mune zvokudya izvi uchadya kure pane mazino enyu. wo, zvave vakaedzwa kuti kwakadai muchero uye muto kunowedzera mukana nokuda iine acid reflux kana kuparadzwa pamberi mubhedha, izvo vo inobata kunyemwerera kwako. saka, edza kunyanya kudzivisa zvokudya izvi uye facial usiku.
ZANO! Nyorawo zvakawanda dheri zvigadzirwa vari zvaunodya. simba, meno utano anogona kunzi kune zvinovaka muviri ari zvekudya akafanana yogati, mukaka uye chizi.
Unogona kuva rakanga rachena concoction pamba peroxide uye kubikira pasoda. Shandisa muvhenganiswa ichi kukwesha mazino enyu kwemaminitsi gumi pakatsaurirwa. Ngwarira zvakaoma sei iwe kukwesha, sezvo kungaparira pamatadza bundu.
A nzira nyore nokuti akachena mazino kuti kusanganisa tafura munyu pamwe remoni muto. Chengeta musanganiswa chero chakapoteredzwa mugaba, kuitira kuti unogona kurishandisa kazhinji uye kashoma akapamba.
ZANO! Kunwa kuburikidza ane uswa kunogona kubatsira kudzivirira mazino echitema. By kunwa kuburikidza uswa, ungaderedza nguva kuti mazino enyu kupesvedzera nemvura.
Mabhakitiriya kuchakura kumativi muromo vako vanokutevera udye. Kana mazino enyu haana kucheneswa, mabhakitiriya kungaita yakawanda matambudziko, saka yeuka kukwesha navo.
Tora yaoma Bay mashizha uye waoma Orange rinokwatuka nokugedagedesa achivapinza upfu. Wedzerai achitevedzera pamusoro pombi mvura kuti upfu, uye zvichaita pakarepo kuita dzinongoitika mazino rakanga rachena mushonga wemazino. Izvi zvakare rawanikwa kudzivisa dzimwe nyaya dzine chokuita mazino ako.
ZANO! Fruit inogona kushandiswa kukuru, dzinongoitika, ngozi nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino. Mastrawberry vanoshanda kunyanya zvakanaka chinangwa ichi.
Kana zviumbwe hadzikwani mazino ako zvakanaka, mishonga kubva rakanga rachena Ngirozi anogona seep panze zvichiguma pamatadza bundu.
Vamwe mishonga kuchabatsira kuzvichenesa zvikadaro meno, akadai womuapuro cider vhiniga. It anozivikanwa kuchenesa mazino ako uye kubvisa echitema apo achibvisa utachiona mumuromo mako. Edza gargling vhiniga pamusoro kamwe pazuva usati kukwesha mazino enyu.
Kunyemwerera kwako vachatarira yakajeka. Edza kushandisa muromo ruvara ane lipstick kuti anotarisa yebhuruu anotsanangura kana kushandisa muromo Gloss. Mavara dziri Mavara yebhuruu-tined kana michero kubatsira mazino enyu oneka akachena. Garai kure matte muromo zvigadzirwa sezvo vanogona kukonzera mazino ako.
Kunwa mvura pashure mabhodhoro zvinwiwa kuti aizonyatsovachenesa mazino anogona kuchengeta mazino ako. A mvura sukurudza kunodzivisa aizonyatsovachenesa kukonzera kumwa setting.You kunogonawo kunwa kuburikidza uswa.
Nechokwadi kuti imi kukwesha, floss, uye shandisa chingamu kukwiza muviri kanenge kaviri pazuva. Zvikuru optimum nzira nechokwadi mazino yenyu kukwesha uye floss nguva dzose kana muchidya kana kunwa chinhu. Ukadaro unogona kuva nechokwadi kubvisa chikafu nemarara uye nebheji kuti aigona anopedzisira staining mazino enyu.
Strawberry namatidza kunogona kukubatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino. Mash kutsva mastrawberry ive namatidza, uye ipapo kushandisa musanganiswa kuti mazino enyu. Strawberry kare achaita mazino enyu ndichene pasina kudikanwa makemikari utsinye. Izvi musha rakanga rachena nzira inogona kukubatsira kudzivisa pamusoro-rakanga rachena uye akupe kunyemwerera muropa chena.
Mouthwash angave achiita mamwe mazino ako. Kumbira chiremba wemazino yako kana hamuna mazino anogona kutsungirira migumisiro yokushandisa mouthwash.
By ikozvino munoziva pane yakawanda pamaonero panyaya rakanga rachena mazino. Unofanira kuva dzimwe pfungwa zvino sei kuwana kuti pearly chena kunyemwerera pasina kukuvadza mazino ako. Kushandisa zano munyaya ino uye ngozi kuenda nezvokuva kunyemwerera kwako chichiwedzera.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 5, 2016 pa 12:51 AM
Categories: Kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tips Tags: Bright White Smile, Get A Bright White Smile, sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino, kuzvichenesa zvikadaro mazino angu, kuzvichenesa zvikadaro meno, kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, Yellow kunyenama